राति निदाउँदा देखिने सपनाबारे केहि तथ्यहरु - आजकोNepal
राति निदाउँदा देखिने सपनाबारे केहि तथ्यहरु
संवाददाता २१ माघ २०७७, 10:35 am
तपाईं सपना देख्नुुहुन्छ ? भविष्य बनाउने सपना होइन, निदाउँदा देख्ने सपना । देख्नुहुन्न भने पनि तपाईंले अरू कसैले सपना देखेको भनेको त सुन्नुभएकै होला । कतिपय मान्छेले निकै डरलाग्दा सपना देखेको पनि बताउँछन् । कोही सपनामा अनौठो ठाउँमा पुगेको सुनाउँछन् । मानिसहरू आफ्नो जीवनको तीन भागको झन्डै एक भाग सुतेरै बिताउँछन् । त्यो अवधिमा धेरै खालका सपना देखिन्छ । कतिपयले देखेको सपना पूरै सम्झन्छन् र वर्णन गर्छन् । कतिपयले भने देखेको सपना बिरलै सम्झन्छन् । अझ कतिपयले त सपना देखेको वा नदेखेको पनि सम्झँदैनन् । जानौँ सपनाबारेका १० रमाइला तथ्यहरू :
१. ९० प्रतिशत सपना बिर्सन्छौँ
विज्ञहरूका अनुसार देखेकोमध्ये ९० प्रतिशत सपना बिर्सन्छौँ । यो संख्या व्यक्तिपिच्छे फरक पर्ने गर्छ । यद्यपि, सत्य के हो भने धेरैले देखेको धेरै सपना बिर्सन्छन् । केही सपना यस्ता पनि हुन्छन् कि राम्रोसँग याद हुन्छ र अरूलाई पनि पूर्ण रूपमा सुनाउन सकिन्छ । तर, धेरै सपना भने सधैँभरिका लागि बिर्सिन्छ ।
२. दृष्टिविहीनले पनि देख्छन् सपना
हामीलाई लाग्न सक्छ, आँखा देख्नेले मात्रै सपना देख्छन् । तर, यो गलत विश्वास हो । दृष्टिविहीनहरूले पनि सपना देख्छन् । तर, उनीहरूले देख्ने सपना फरक हुन्छ । विज्ञहरूका अनुसार दृष्टि भएकाहरूले देख्ने र दृष्टिविहीनहरूले देख्ने सपना फरक हुन्छन् ।
३. नसम्झनेले पनि देख्छन् सपना
कतिपयले सोच्छन् होला, सपना याद नै छैन भन्ने व्यक्तिहरूले सपना नै देख्दैनन् । तथ्यले अरु नै देखाएको छ । केही व्यक्तिले आफूले देखेको सबै सपना पूर्ण रूपमा बिर्सन्छन् । तर, त्यसको अर्थ यो होइन कि उनीहरूले सपना नै देख्दैनन् । सबै मान्छेले सपना देख्छन् । त्यसैले याद रहँदैन भन्दैमा सपना देख्दैनन् भन्नु गलत हुनेछ ।
४. देखेकै अनुहार सपनामा
कहिलेकाहीँ सपनामा बिलकुलै नयाँ अनुहारलाई पनि देख्ने गरिन्छ । यस्तो वेला लाग्न सक्छ कि त्यो अनुहारलाई कहिल्यै देखेकै छैन । तर, सपनामा अरू वेला देखेको व्यक्तिलाई नै देखिन्छ । धेरैजसो चिनेकै व्यक्तिलाई सपनामा देखिन्छ ।
कहिलेकाहीँ नयाँ अनुहार पनि देखिन सक्छ । कतै बाटो हिँड्दा एक झलक मात्रै भए पनि देखेकै व्यक्ति सपनामा देखिन्छ । बाटो हिँड्दा नजिक भएर गएको अनुहारलाई पनि सपनामा देखेको हुन सक्छ ।
५. श्यामश्वेत सपना
प्रायः सपना रंगीन नै देखिन्छ । तर, कतिपयले देख्ने सपना रंगहीन पनि हुन्छन् । श्यामश्वेत सपना । जसमा कुनै कलर हुँदैन । केही व्यक्तिलाई उसले देखेको सपनाको रंग कस्तो थियो भन्नेबारे जानकारी पनि हुँदैन । अमेरिकी मनोविज्ञहरूको संस्थाले जनाएअनुसार वृद्धवृद्धाहरूले रंगहीन सपना देख्छन् । किन भने उनीहरू त्यस्तै श्यामश्वेत वातावरणमा हुर्किएका हुन्छन् ।
६. लुकेको अर्थ
सपनाले विभिन्न अर्थ दिने गर्छ । वा सपनाहरू सांकेतिक अर्थले भरिपूर्ण हुन्छन् भन्दा पनि हुन्छ । वास्तविक जीवनसँग सम्बन्धित रहेका निश्चित वस्तु, घटना र अनुभवहरू नै सपनामा दोहोरिने गर्छन् । सपनाको बारेमा धेरै लामो समयदेखि अध्यनहरू पनि हुँदै आइरहेका छन् । सिग्मन्ड फ्राइडजस्ता वैज्ञानिकले पनि आफ्नो महत्वपूर्ण समय सपना र त्यसको अर्थको बारेमा अध्ययन गर्नमा खर्च गरेका छन् ।
७. एक व्यक्तिले कति सपना देख्छ ?
औसतमा एकजना स्वस्थ्य र सामान्य व्यक्तिले एक रातमा चारदेखि सातवटासम्म सपना देख्छ । त्यसमध्ये कुनै सपना पूरै र लामो समयसम्म पनि सम्झिन्छ । केही सपना भने क्षणभरमै बिर्सन्छ । हामी आफूले देखेको सपना बिर्सने भएका कारण वास्तवमा कतिवटा सपना देख्यौ भनेर भन्न मुस्किल हुने गर्छ । साथै, कति लामो र कति थरीको सपना देख्यौँ भनेर यकिन गर्न पनि मुस्किल हुन्छ ।
८. के जनावरले पनि सपना देख्छ ?
बिरालो वा कुकुरजस्ता घर पालुवा जनावरले मानिसले सपनामा गर्ने जस्तै व्यवहार गरेको देखिन्छ । दबिएको स्वरमा कराएको वा रोएको सुनिन्छ । वा, उनीहरूले सुतेको वेला पनि अरू वेलामा हिँडेको जस्तै गरी खुट्टा चलाएको देखिन्छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने यी जनावर सुतिरहेकै समयमा पनि उनीहरूको दिमागमा केही न केही त भइरहेकै छ । सत्य कुरा जनावरलाई सपनाको बारेमा सोध्न त सकिँदैन । यद्यपि, उनीहरूमा देखिने यस्ता गतिविधिबाट भने उनीहरूले पनि सपना देख्छन् भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ।
९. तीव्र आँखाको चाल
आँखाको चाल तीव्र हुनु वा आँखाको चाल देखिनु सपना देखिरहेको अवस्था हो । यस्तो वेला कहिलेकाहीँ शरीर नचल्ने हुन्छ । वा ‘प्यारालाइज्ड’ भएको जस्तै हुन्छ । सपना देखिरहेको समय ब्युँँझियौँ भने पनि कहिलेकाहीँ चल्न सकिरहेको हुँदैन । तर, यस्तो निकै कम व्यक्तिमा मात्रै हुन्छ ।
१०. वास्तविक घटनाको प्रभाव
कहिलेकाहीँ निदाउँदा देख्ने सपनालाई पनि वास्तविक जीवनमा भइरहेका कुराले प्रभाव पार्ने गरेको हुन्छ । जस्तो कि कसैले सपनामा बेजोडले पिसाब लागिरहेको र ट्वाइलेट जान खोजिरहेको सपना देखिरहेको हुन्छ । उक्त व्यक्ति तत्काल ब्युँझिदा वास्तवमै पिसाब लागिरहेको हुन्छ । यो सामान्य कुरा हो ।